को’रोना बारे विभिन्न खोज अ’नुसन्धानको आधारमा विनोद त्री’पाठीले लेखे यस्तो जानकारीमुलक लेख! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
को’रोना बारे विभिन्न खोज अ’नुसन्धानको आधारमा विनोद त्री’पाठीले लेखे यस्तो जानकारीमुलक लेख!
डब्लुएचओको विश्वास नगर्न विश्वभर आवाज उठ्दै, विज्ञहरु भन्छन्,‘कोरोनाको हल्ला बढि भयो, अन्य रोगका मृतक पनि कोरोनाको मृत्युमा गणना गरियो, चीनको ष’डयन्त्र नाँगिंदै, केहि देशमा नो लकडाउन, नो कोरोना, नो माक्स, नो डेथ
पछिल्लो एक महिनादेखि कोरोना भाइरसका बिषयमा अनेक बिवरण सार्बजनिक भइरहेका छन् । जनवरीको शुरुमा देखिएको यो भाइरसको बिषयमा विश्वका शक्ति रा’ष्ट्रले शुरुका दिनहरुमा त्यति मतलब गरेका थिएनन् । अहिले सिंगो विश्वले चीन तर्फ फर्किएर प्रश्न तेर्साउन शुरु गरिसकेको छ ।
विश्वका विभिन्न स्रोत’हरुको अध्ययन गरेपछि केहि विवरणहरु जानकारी दिंदैछु । जुन बिषयले विश्वका धेरै सर्बसाधारणलाई हैरान बनाउन थालिसकेको छ ।
यतिबेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु’एचओ) को संसारका केहि देशहरुवाट तिव्र आलोचना शुरु भएको छ ।
डब्लुएचओले शुरुदेखि नै विश्वलाई सर्तक गराएको थियो, जुन कुरा अमेरिका लगायतका मुलुकले इन्कार गरिरहेका थिए । फेरि विचमा यो भाइरस दक्षिण कोरिया हुँदै युरोप फैलियो, अनि अमेरिका गंभिर बन्यो । डब्लुएचओले स’र्तक गराएको होइन, त्रसित बनाएको हो, जुन चीन लगायतका राष्ट्रको चंगुलमा परेको छ ।
यो आरोप डब्लुएचओ माथि छ । केहि दिनदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त डब्लुएचओमा हालका पदाधिकारी खारेजको आक्रोष पोखिरहेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका पुर्वपदाधिकारीदेखि मानवअधिकारकर्मीहरुले हालका डब्लुएचओका सदस्यप्रति आक्रोष ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
प्राय डब्लु’एचओले पछिल्लो पटक बुधवार विवरण सार्बजनिक गर्दे आएको छ । डब्लुएचओले कोरोना भाइरसको बिषयमा पछिल्लो अध्याबद्यीक गराउँदै आएको छ । जुन विवरण विश्वका मुलधारका मिडियाले प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेका छन् । प्रशारणका क्रममा डब्लुएचओ माथि विश्वभरिवाट लाखौंका प्रतिक्रियाहरु बर्षिएका छन् ।
केहिको आरोप छ,‘चीन’संग डब्लुएचओले पैसा खाएर यो अफवाह फैलाएको हो ।’ उनिहरुले प्रत्यक्ष प्रश्न सोधेका थिए,‘चीनसंग कति पैसा खाइस र यो त्रास फैलाएको छस् ।’ केहिले आरोप लगाएका थिए कि चीनले जैविक हतियार मार्फत विश्वलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिंदैछ ।
केहि जानकारहरुको भनाइ यस्तो थियो,‘विश्वका शक्ति राष्ट्रका मुठ्ठिीभरका ब्यापारीले यो भा’इरस निकालेर विश्व अर्थतन्त्र डामाडोल पार्ने खेल खेलिरहेका छन् । यो भाइरस एक प्रकारको कडा नि’मोनिया हो । यसलाई नक्कली प्र’चार गरेर विश्वलाई बन्द गराउने खेलिंदैछ । संसारमा दैनिक लाखौं मानिस कुनै न कुनै कारणले मरिरहेका हुन्छन् ।
ति मरेकाहरुका विवरणहरु पनि कोरोना भाइरस मार्फत भएको भनेर गलत प्रचार भइरहेको छ । रुघा’खोकी, ज्वरो जस्ता संक्रमण हरेक दिन सबैलाई विश्वभरि भइरहेको हुन्छ । के तिनिहरुलाई कोरोना लागेको भनेर त्र’सित वनाइदिने ? यो प्रविधीको दुरुपयोग हो । आफ्ना प्रविधीलाई विश्वभरि अनिवार्य प्रयोग गराउन केहि ब्यापारीले यो खेल खेलेका हुन सक्छन् ।’
अमेरिका, बेलायत, स्पेन, इटली लगायतका देशमा मृत्यु भएका मानिसको विवरणमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । केहि देशमा कोरोना लागेर मृत्यु भएको शव आ’फन्तलाई दिंईदैन । यसरी प्रतिक्रिया दिनेहरुमा विभिन्न विज्ञहरु, प्राध्यापक, अनुशन्धानकर्ताहरु छन् । उनिहरुले डब्लुएचओको सुचनालाई विश्वास नगर्न आफ्ना सामाजिक साइटहरुमा आग्रह गरिरहेका छन् ।
केहि जानकारहरुको आ’रोप छ,‘चीनले आँफै भाइरस उत्पादन गर्यो, अनि आँफै खोप र औषधी उत्पादन गरेर अरबौं कमाउन यो खेल खेलेको हो ।’ चीन विश्वमा अर्थतन्त्र र शक्ति कब्जा गर्न चाहन्छ । केहि वि’ज्ञहरुको अनुमान छ,‘चीनवाट यो भाइरस उत्पादन भएपनि शक्ति राष्ट्रहरु यसैमा टेकेर भ्या’क्सिन उत्पादन गरेर कमाउने दाउ खोजिरहेका छन् । जस्तै,अमेरिकाले भ्याक्सिन उत्पादन गरेर ब्यापार गर्ने दाउ पर्खिरहेको छ ।
’ चीनले विभिन्न मे’डिसिन सामानहरु अनुदानमा निर्यात गरेर विश्वको मन विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेको छ । उसको उद्धेस्य मुलत ब्यापार गर्ने हो ।
माथि उल्लेखित विश्वका विभिन्न ब्यक्तिहरुको तर्कका आधारमा केहि राष्ट्रहरु लक्डाउनको पक्षमा छैनन् ।
डब्लु’एचओले संसारका सबै मुलुकलाई भनिरहेको छ, ‘घर वाहिर ननिनस्कनु ।’ तर, केहि राष्ट्रले यो विश्वास गरेका छैनन् । अमेरिकाका केहि राज्यमा अहिले पनि लक्डाउन छैन । जापानले आपतकाल घोषणा गरेपनि लकडाउनको विरोध गरिरहेको छ । चीनले गरेको पहिलो प्रयोग रसियाले गरिदिएको थियो । नागरिकलाई प्रभावित पार्न रसियन राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले सडकमा सिंहहरु छोडिदिएका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्र’पति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई चीनको गंभिर षडयन्त्र घुसेको आरोप लगाइरहेका छन् । उनि यसलाई कोरोना होइन, चाइनिज भाइरसको नामाकरण गरिदिएका छन् । विश्वका केहि अध्ययनकर्ताहरुले कोरोना होइन, कम्युनिष्ट भाइरस भन्नुपर्ने अथ्र्याउन थालेका छन् ।
तुर्कमेनिस्तानमा ल’डकडाउन त के कोरोना भाइरसको नाम लिन पनि पाईंदैन । त्यहाँको सरकारले माक्स लगाउनेलाई कारवाही गरेको छ । जनजिवन अन्य समयमा जस्तै सामान्य छ । डब्लुएचओको विवरण अनुसार, तुर्कमेनिस्तानमा कोरोनाको कुनै विरामी फेला परेको छैन । यस्ता मुुलुकहरु विश्वमा ३० भन्दा बढि राष्ट्र छन्, जस्ले कुनै लकडाउन लगाएका छैनन् । उनिहरुमा कोरोनाको कुनै भयावह छैन ।
अहिले विश्वका अ’धिकांश क्षेत्रवाट ड’ब्लुएचओको विवरणलाई विश्वास नगर्न आवाज उठिरहेको छ । यसका सदस्यहरु विकाउमा छन् भन्ने उनिहरुको आरोप छ । डब्लुएचओका कार्यकारी निर्देशक टेड्रोस एढानोम चीन र काला ब्यापारीको चंगुलमा छन् भन्ने विश्वका विभिन्न देशहरुवाट विरोध आइरहेको छ । टेड्रोस इथियोपियाका हुन्।
इथियो’पियामा उनी ७ बर्ष स्वास्थ्यमन्त्री वनेका थिए । उनि इथियोपियाका असफल मन्त्री हुन् । अहिले इथियोपिया चीनको निर्देशनमा चलिरहेको छ । जुन, प्रतिस्पर्धा अमेरिकाकासंग चीनले माथि उठ्न खो’जेको वहुआयामीक चाल हो । यस्ता आरोपले अहिले डब्लुएचओ विवादमा मु’छिएको छ । उनले पछिल्लो पटक आँफुलाई मार्न खोजिएको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् ।
तर, पछिल्लो पटक विश्वभरिवाट विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यदि यो भाइरसको असर हो भने, किन गरिब मुलुकमा परेन ? किन शक्तिशाली देशहरुमा मात्र यसको प्रभाव पर्यो ? किन उच्च ओहोदाका ब्यक्तिहरुलाई मा\_त्र यसको बढि असर परिरहेको छ ? अमेरिका, बेलायत, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया र पछिल्लो पटक भारतमा किन यसको असर परेको छ ?
किन अन्य साना मुलुक जहाँ ज’नघनत्व बढि छ, गरिबी छ, त्यहाँ किन यसको असर कम छ ? अर्काथरिहरुको तर्क छ, विश्वका शक्ति राष्ट्र र शक्तिशाली ब्य’क्तिलाई यसको प्रभाव देखाउनेगरि यो भाइरसको अ’सरलाई प्रमाणित गरिदिने । अनि शक्तिशाली देश र प्रभावशाली ब्यक्तिलाई यसको असर देखाएपछि स्वत, साना देशहरु र अन्य सर्बसाधारणमा यसको प्रभाव परिहाल्छ ।’ यसैलाई टेकेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नै पा’र्टीको निर्णय र विपक्षीको कुरा मान्न तयार छैनन् ।
उनि अमेरिका बन्द हुने मुलुक होइन, सधै खुल्ला हुन्छ भन्दै ल’क्डाउनको विरोध गरेर यो भाइरसप्रति विश्वस्त छैनन् ।
अतः पछिल्लो पटक कोरोना नामक भाइरसको संक्रमणप्रति विश्वका बिभिन्न विज्ञ, जानकार र अध्ययनकर्ताहरुको रायका आधारमा निम्न ३ वटा कुराको निष्कर्ष निस्किएको छ ।
१, यो जैविक भा’इरस हो । प’हिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्वमा अर्को शक्ति राष्ट्र उदाउनका लागि यो भाइरस तयार गरिएको हो । अहिले विश्व जैविक भाइरससंग जुधिरहेको छ ।
२, यो भाइरस पुरानै नि’मोनियाको विकसित रुप हो । यसैका आधारमा चीनले विश्वमा आँ’फुलाई शक्तिशाली प्रमाणित गर्न खो’जिरहेको छ । यो एक प्रकारको चीनको खुफिया रणनीति हो । चीनले आफ्नो देश खुल्ला राखेर विश्वलाई वन्दी बनाउन रणनीति खेलिरहेको छ ।
३, विश्वका एकथरि श’क्तिशाली ब्या’पारीहरु एकजुट छन् । उनिहरुले यो भाइरसको उत्पादन गरिदिए । पहिला उनिहरुले शक्तिशाली देशहरुमा प्रभाव छोडे । अनि शक्तिशाली ब्यक्तिहरुमा । अनि डब्लुएचओ मार्फत विश्वका सबै देशका स्वास्थ्य निकायहरुमा कब्जा गरिदिए । ‘प्रचारमा भनिदिए, ‘मानिस मानिस विचको सम्पर्कमा नरहनु ।’ प्रविधीको प्रयो’ग गर्नु, एकको हातले अर्काको हातमा नछुनु । कारण हो, यसले डिजिटल प्रयोगमा अनिवार्य गरिदिने । जस्तै, एटिम कार्ड, मोवाइल, इन्टरनेट, कम्प्युटर लगायतका विभिन्न सामानहरु । यसको उत्पादन बढाउनका लागि विश्वभरिका मानिसलाई अनिवार्य प्रयोग गर्न बाध्य पारिदिने।
माथि उल्लेखित बि’षयहरु विश्वभरिका बिभिन्न ब्यक्तिहरुले सार्बजनिक गरेका तर्क, अनुशन्धान र अध्ययनका आधारमा ब्यक्त बिषय हुन् । यी सत्य वा आरोपहरु जे पनि हुन सक्छन् । जे जस्ता विचारहरु आए’पनि को’रोना नामक भाइरसवाट बंच्न सजग वन्नैपर्छ । तर, लकडाउन अब आवस्यक छैन भन्ने करिब करिब प्रष्ट हुन थालेको छ । झन नेपाल जस्ता मुलुकले लकडाउन हुँदैन ।
चीनले पनि ए’उटा मात्र राज्य ब’न्द गरेर पुरै देश खुल्ला राखेर कोरोना नियन्त्रण गरेको थियो । लडकडाउनले अर्थतन्त्रलाई मात्र थला पार्छ । भाइरस नियन्त्रण गर्ने नाममा चीनको गलत प्रचारले विश्व त्रसित छ र ल’कडाउन गर्न बाध्य भएका हुन् प्रमाणित हुन थालेको छ । अब आवस्यक छैन । यी वाहिर आएका विभिन्न बिषयहरु कुन सत्य कुन असत्य भविस्यले प्रमाणित गर्ने नै छ ।
(स्रोत, अलजजिरा, विबिसी, सिएनएन, फक्स, डब्लुएचओ, सिसिटिभी, चाइना डेली, विश्वका विभिन्न विज्ञ, अनुशन्धानकर्ताका साइटहरु लगायत दर्जनौं अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित विवरणमा आधारित पत्रकार बिनोद त्रीपाठीले तयार पार्नु भएको लेख)
Previous सु’रक्षाकर्मीको तलब घ’टाउने हैन बरु हाम्रो तलब क’टौती गरि बढाई दिऔं : सांसद गगन थापा
Next अहिले प्रहरीलाई भत्ता दिने हो, पैसा का’ट्ने होइन, सरकारले का’टेछ भने, म प्रहरीलाई स’हयोग गर्छु।